Basketball Africa League (BAL) - VOA
Horyaalka BAL: AS Sale (Morocco) oo 91-84 kaga badisay DUC (Senegal)
Kooxda AS Sale ee dalka Morocco ayaa 91-84 kaga adkaatay kooxda DUC ee Senegal, cayaar ka tirsaneyd horyaalka Kubadda Kolayga Afrika ee BAL .
Horyaalka BAL: REG (Rwanda) oo 75-74 kaga adkaatay US Monastir (Tunisia)
Kooxda ka socota Rwanda ee REG ayaa 75-74 kaga adkaatay kooxda US Monastir ee dalka Tunisia, cayaar ka tirsaneyd Horyaalka Kubadda Kolayga (BAL) oo ka socda magaalada Dakar ee dalka Senegal.
Horyaalka BAL: SLAC (Guinea) oo 90-74 kaga adkaatay CFV Beira (Mozambique)
Kooxda SLAC ee dalka Guinea ayaa 90-74 kaga adkaatay kooxda CFV Beira ee dalka Mozambique, cayaar ka tirsaney horyaalka kubadda kolayga Afrika (BAL) ee ka socda magaalada Dakar ee dalka Senegal.
Horyaalka BAL: CFV Beira oo 98-92 ku garaacday Dakar University Club (DUC)
Kooxda CFV Beira ee dalka Mozambique ayaa 98-92 kaga adkaatay kooxda Dakar University Club (DUC), cayaar ka tirsaneyd xilli cayaareedka labaad ee Horyaalka Kubadda Kolayga Afrika (BAL), oo ka socda magaalada Dakar ee dalka Senegal.
GOOS GOOS: US Monastir oo 77-71 kaga badisay CFV Beira
Kooxda US Monastir ee Tunisia ayaa Axaddii March 6, 2022, waxay 77-71 kaga adkaatay kooda CFV Beira ee dalka Mozambique, maalintii labaad ee cayaaraha Horyaalka Kubadda Kolayga Afrika ee BAL oo ka socda magaalada Dakar ee dalka Senegal.
GOOS GOOS: Kooxda REG ee Rwanda oo 91-87 kaga adkaatay kooxda AS Salé ee Morocco
Kooxda dalka Rwanda ee REG BBC ayaa kaga adkaatay kooxda AS Salé ee Morocco 91-87, cayaartii labaad ee maalinkii koowaad ee Horyaalka Kubadda Kolayga Afrika ee (BAL), cayaartaas oo ka dhacday magaalada Dakar ee dalka Senegal, March 5, 2022.
Kooxda Kubadda Koloyga ee Seydou Legacy Athletique Club (SLAC) ee waddanka Guinea ayaa guul ka gaartay furitaanka koobka Sahara ee kooxaha horyaallada Africa, kadib markii ay 85-70 uga adkaatay kooxda Dakar Universite Club (DUC) ee dalka Senegal ciyaar kadhacay garoonka Dakar Arena Sabtidii.
Zamalek oo hanatay Horyaalka Basketball Africa League (BAL)
Kooxda Zamalek ee dalka Masar ayaa 76-63 kaga adkaatay Kooxda Tunisia ee US Monastir, ayada oo ku guuleysatay horyaalkii ugu horreeyey ee Kubadda Kolayga Afrika ee Basketball Africa League (BAL).
Zamalek iyo US Monastir oo isugu soo haray cayaarta final-ka ee horyaalka BAL
Kooxda US Monastir ee dalka Tunisia ayaaa 87-46 kaga adkaatay kooxda Patriots BBC ee dalka Rwanda, ayada oo kooxda Zamalek ee dalka Masar kula biirtay cayaarta final-ka ee Horyaalka Kubadda Koleyga Afrika ee Basketball Africa League (BAL).
Afar koox oo u gudbay semifinal-ka Horyaalka Basketball Africa League (BAL)
Kooxda Zamalek ee Masar ayaa 82-53 kaga adkaatay kooxda Forces Armes et Police Basketball ee Cameron, cayaartii sideed dhammaadka ee horyaalka Basketball Africa League (BAL), halka ay kooxda Clube Atltico Petroleos de Luanda ee Angola ay 79-72 kaga adkaatay kooxda AS de Sal ee Morocco.
US Monastir ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee u gudubta wareegga sideed dhammaadka ee Horyaalka Basketball Africa League ee ka socda magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda, halka kooxda Ferroviario de Maputo ay sidoo kale gudubtay kadib guulo ay ka gaareen kulamadii ugu dambeeyey.